Na Machị 10, 1893, Onye isi ala France bịanyere aka n'akwụkwọ na -eme ka ọchịchị nke Côte d'Ivoire - Afrikhepri Fondation
Welcome OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ
Na Machị 10, 1893, Onye isi ala France bịanyere aka n'akwụkwọ na -emepụta ọchịchị nke Côte d'Ivoire
Lya March 10, 1893, onye Sadi Carnot, onye bụ onye isi ala France, bịanyere aka na iwu nke na -eme ka ọchịchị nke Côte d'Ivoire. Naanị, ana m enye iwu a, nke bụ ihe a na-amaghị kemgbe.
Ogige French French Guinea, Ivory Coast na Benin bụ obodo nwere obodo atọ dị iche iche bụ ndị nkewa n'etiti mpaghara ndị mbụ nke edepụtara na ederede 4 nke iwu nke February 2, 1890.
Ekelere gọvanọ nke ọ bụla n'ime mpaghara ndị a dị n'aka gọvanọ nke onye odeakwụkwọ ukwu nyere ya aka.
Ndị gọvanọ nke French Guinea, Ivory Coast na Benin na-arụ ọrụ ruo n'ókè niile nke obodo ha dị iche iche, ikike nke iwu na ụkpụrụ siri ike, yana usoro nke Organic nke Septemba 7, 1840.
Gọvanọ nke French Guinea bụ onye na-ahụ maka mmebe nke nchekwa nke Republic na Fouta-Djalon na ókèala ndị agbata obi. Gọvanọ nke Côte d'Ivoire bụ onye na-ahụ maka iji ihe nchebe nke Republic na steeti Kong na ókèala ndị ọzọ nke Niger. Agbanyeghị, steeti Samory na Thiéba ka nọ n'okpuru ikike nke ọchịagha kachasị elu nke French Sudan. Ọrụ gọọmentị Benin ga-agbasa na ntọala niile nke dị n'etiti ala bekee nke Lagos na ndị German nke Togo na ókèala ime ụlọ.
A na-enye onye ọgaranya ụgwọ ọrụ ọ bụla n'ime ụlọ ahịa ọ bụla.
A na-ewepụzi ihe oriri niile megidere iwu a.
NB: Iwu nke Septemba 7, 1840 metụtara Senegal na ihe ndabere ya dabara na Côte d'Ivoire. Otu gọvanọ na isi ndị isi abụọ ga-enyere ndị gọvanọ aka aka (ị gụrụ na aka nri, Lol). Ndi ochichi a, ndi isi ochichi abuo na ndi amara aha ha abuo ndi ochichi a.
Site n'aka André Silver Konan (Odeakụkọ-edemede)
Nkịtị dị nsọ - oge na oghere, ọrụ ebube na nkwenye (Audio)
Lelee mgbe adala oge 3 (2016)
Monomotapa, alaeze Afrika nke oge ochie